हामीले पकाएको खाना पकाइसकेपछि के छोडिन्छौं? | ThermoRecines
एक स्वादिष्ट स्टु तर ... अब हामी के गर्छौं भने के छोडिन्छ?
इरेन आर्कास | | क्षेत्रीय भोजन, तरकारीहरू
स्रोत - Hogarmanía
El कोसिडो एक परम्परागत स्पेनिश पकवान हो, एकदम सरल, र लामो तयारीको साथ। राम्रो स्ट्युको सफलता भनेको धेरै राम्रो गुणस्तरका सामग्रीहरू प्रयोग गर्नु हो। यसले ब्रोथको स्वाद र शरीर प्रदान गर्दछ, छोसा ठीक छ, र मासु कोमल र स्वाददार।
यो स्प्यानिश भूगोल भर एक धेरै व्यापक डिश हो र यसको अर्थ त्यहाँ पकाइएको धेरै संस्करणहरू छन्, सबै प्रत्येक क्षेत्रको सबै भन्दा खास र परम्परागत सामग्री द्वारा परिभाषित।
1 एक राम्रो स्टू को विशेषताहरु के हो?
2 सबैभन्दा प्रसिद्ध स्ट्यु संस्करणहरू के हुन्?
3 स्टूको अवशेषको कसरी फाइदा लिन सकिन्छ?
एक राम्रो स्टू को विशेषताहरु के हो?
स्ट्यु धेरै भाँडाहरू मिलेर बनेको हुन्छ, वा यसलाई प्रायः "ओभरटर्न" भनिन्छ। सबैभन्दा आधारभूत मा चना र त्यसपछि मासु र तरकारी संग शोरबा दुई पालो बनाइएको छ, तर त्यहाँ मासु, बदाम, चामल, अचार, तरकारी, सॉसेज को एक ठूलो विविधता को प्रयोग गरीएको चौध सम्म पालो छन् ... बनाउन। यो महान परिकार को एक भोज।
त्यहाँ संस्करणहरू पनि छन् जसमा स्ट्यु केही फ्राइड अण्डाहरू, टमाटर, चोरिजो र रगत सॉसेजको साथ समाप्त हुन्छ।
सबैभन्दा प्रसिद्ध स्ट्यु संस्करणहरू के हुन्?
म्याड्रिड स्टू: यो सबै स्ट्युहरूमा सबैभन्दा प्रसिद्ध छ। यो तीन मोडमा बनेको छ, पहिलो चाउचाउको सूप, दोस्रो तरकारी तरकारी (गोभी, गाजर, शलगम ...) र तेस्रो मासु, चिसो मासु, बेकन र मज्जाको साथ छोला।
लालन स्ट्यू: सामान्य ग्यालसिया, यो सबैभन्दा प्रसिद्ध हो किनकि यस थालको वरिपरि फेयर पर्दछ।
लेबनिएगो स्टू: क्यान्ट्याब्रियाको विशिष्ट, जसमा crumbs, अण्डा र मासुको साथ एक पल्ट समावेश छ।
पकाएको मारागाटो: लेनको विशिष्ट हो, यसले सात मासु सम्म प्रयोग गर्दछ र तीन पालोमा प्रयोग गरिन्छ, तर यसको विचित्रतामा कि इन्द्रियलाई उल्टाइन्छ ताकि यो मासुबाट सुरु हुन्छ र सूपबाट अन्त्य हुन्छ।
माउन्टेन स्ट्यू: क्यान्टाब्रियाको पनि विशिष्ट, यसको मुख्य विशेषता छ कि चानाको सट्टा सेतो सेम प्रयोग गरिन्छ।
Andalusian पकाइयो: केहि केसहरूमा सुँगुरको मासु गोमांस भन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ, किनकि यो यस क्षेत्रमा अधिक विशिष्ट र प्रचुर मात्रामा पाइन्छ।
पकाइएको बलहरू: मर्सिया, लेभन्ते र आन्दुलसिया क्षेत्रको धेरै नै ठराविक हो, यो बलले बदामको मासु, मसला, लसुन, अण्डा, रोटी र अजमोदबाट बनेको बोटले चित्रण गर्छ। बलहरू पनि शोरबामा पकाइन्छन् र डम्पहरू मध्ये एक हुन्।
पकाएको ग्यालेगो: यो भाभी, पोर्क काँध, चोरिजो, शलजम साग र आलु भेट्टाउनु सामान्य हो, भनेको हो, स्पेनको उत्तरबाट धेरै विशिष्ट उत्पादनहरू।
स्टूको अवशेषको कसरी फाइदा लिन सकिन्छ?
खैर, अब जब हामी एक स्वादिष्ट स्टू चाख्नुभयो ... हामीले छोडेका सबै चीजहरू के गर्छौं? हामीसँग छोला, तरकारी, अनगिन्ती मासुहरू छन् ...
ठिक छ, हामी यहाँ तपाईलाई एउटा विकल्प छोडछौं उत्तम रेसिपीहरु को लाभ लिन प्रत्येक सामग्री:
पकाइएको चामल - यहाँ हामी सबै थोरै प्रयोग गर्नेछौं: छोला, तरकारी र मासु। स्वादिष्ट!
पकाइएको क्रोकेट्स - कुखुराको फाइदा लिन र बेचमेललाई सबै स्वाद दिनको लागि अलि स्ट्यु ब्रथ प्रयोग गर्नुहोस्।
नाशपाती, स्याउ र अखरोट संग गोभी - पकाइएको बन्दकोबीको फाइदा लिन र एक उत्तम तरकारी पकवान बनाउन।
परम्परागत चना ह्यूमस - भूमध्य भोजनको क्लासिक जुन स्ट्युबाट चिसो प्रयोग गरेको विशेष स्वाद हुनेछ।
खुर्सानी र खसी पनीरको साथ - छोलेको फाइदा लिन एक स्वादिष्ट पकवान।
चिक्की सलाद - सजिलो र सरल, साथ साथै स्वस्थ र पौष्टिक। यो एक उत्तम स्टार्टर हो, र color र स्वादले पूर्ण।
सी को फाइदा लिनअल्डो, हामी यसलाई भाँडामा वा टुपरमा फ्रिज गर्छौं र हामी यसलाई पछि नूडल सूप, चामल, पास्ता बनाउनको लागि प्रयोग गर्न सक्दछौं, वा यसलाई चावलको लागि खाना पकाउन शोरेशनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछौं (यस नुस्खामा जुन हामीले माथि राख्यौं। पकाइएको भात).
तपाईं छोला फ्रिज गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई पछि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईं चाहानुहुन्छ। खैर, छोले यदि तपाईंले तिनीहरूलाई राम्रोसँग निकाल्नुभयो र तिनीहरूलाई प्रशस्त तातो तेलमा फ्राई गर्नुभयो र त्यसपछि केही छर्कट नुन थप्नुभयो भने वास्तवमै स्वादिष्ट हुन्छ। तपाईं तिनीहरूलाई टमाटर र दालचीनी सॉसको साथ sautéed पनि गर्न सक्नुहुनेछ (हामी चाँडै यसलाई ब्लगमा प्रकाशित गर्नेछौं)।
मासु पनि काट्न सकिन्छ र रिसोट्टोका लागि वा स्यान्डविच भर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ (चाँडै हामी ब्लगमा स्ट्युबाट मासुको साथ एक स्वादिष्ट अंडालूसी तपस पनि प्रकाशित गर्नेछौं)। त्यसैले ... रहनुहोस्!
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: क्षेत्रीय भोजन, तरकारीहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » लेखहरू » सामान्य » क्षेत्रीय भोजन » एक स्वादिष्ट स्टु तर ... अब हामी के गर्छौं भने के छोडिन्छ?
फ्रिज सफा राख्नका लागि तरिकाहरू
पालक सुविधाहरू, गुणहरू ... र कसरी बगले पोपिएमा पुग्दछ